Full Metal Monsters na-etinye gị n'ihu 5v5 multiplayer egwuregwu nke dinosaurs | Androidsis
Full Metal Monsters na-abịa na okpomọkụ nke royale agha ịghọ onye na-egwu egwuregwu n'ịntanetị nke anyị ga-eche ndị egwuregwu ndị ọzọ ihu na maapụ dị mkpirikpi na ndọtị. Anyị ga-alụ ọgụ maka ụfọdụ ntọala ka ha wee nwee ike imeri ndị mmegide anyị nke ọma.
Aha 3D nke cizute ndị bụ isi ogige ịbụ otu nke ọgụ n'ezie na-adịghị echekwa nke ọma, ọ bụ ezie na ọ nwere ogologo ụzọ iji nwee ike ihu egwuregwu ndị ọzọ na udi ya. N'ezie, ọ bụrụ na-amasị gị dinosaurs, ị nwere ike ị maralarị echiche na ị ga-ewu nke nwere ezigbo ngwa agha.
1 Dinosaur na-efe efe, na-awụlikwa elu ...
2 Jiri nkà n'oge kwesịrị ekwesị na Full Metal Monsters
3 Dinosaur na mkpanaka gị
Dinosaur na-efe efe, na-awụlikwa elu ...
Anyị na-eche ihu a 5v5 agbapụ nke ị ga-ejikwa mara ka ị ga-esi bugharịa dinosaur gị n'ọgbọ agha mgbe ọ na-awụlikwa elu, na-efe efe ma ọ bụ na-ekpuchi mgbidi iji nwee ike ibelata ike nke onye iro gbagburu. Aha nke anyị ga-emeziwanye dinosaur anyị ka anyị na-emeghe ọtụtụ ndị ọzọ ka ha nwee ike ihu otu ndị ka mma ihu.
Full Metal Monsters bụ egwuregwu 3D nke teknuzu mmezu adịghị njọ ma ọlị. Anyị ga-egwu megide dinosaurs ọla dị egwu na ụwa post-apọcalyptic nke dabere na ụdị egwuregwu dị iche iche ka anyị nwee oge na oge ntụrụndụ. N'ezie, eziokwu ahụ bụ na anyị nwere ike iji dinosaur dara dara anyị efe efe na-enye ya nnukwu ihe na ụfọdụ ndị egwuregwu ga-ahụ n'anya.
N'ezie, agha ndị ahụ agaghị abụ ihe magburu onwe ya nke ndị nwere ezigbo mmetụta na ihe niile okomoko nke anwụrụ ọkụ, flares na ndị ọzọ, ma. ee ha nwere esemokwu dị mkpa nke mere na mgbe ndị egwuregwu abụọ ma ọ bụ atọ na-eso anyị, anyị ga-ahụ ibe anyị ka anyị nwee ike ihu ha na-enweghị ndụ anyị n'ụzọ.
Jiri nkà n'oge kwesịrị ekwesị na Full Metal Monsters
Full Metal nnukwu anụ na-enye anyị ohere mara nkà dị iche iche nke dinosaurs anyị. Nkà dị ka lunges, jumps, ebe stuns ma ọ bụ mmeghari ohuru, bụ ihe atụ doro anya na anyị ga-amata ka anyị ga-esi jiri ha mee ihe n'oge ahụ kpọmkwem iji nweta uru nke onye iro.
Otu ihe ahụ na-emekwa na ngwá agha ndị anyị nwere ike ịgbakwasị n’azụ dinosaur ọla anyị bụ́ ndị na-esi na égbè nkịtị ruo na-esote-gen blasters. Otu ihe ahụ na-eme na agha ikuku nke ga-enyere anyị aka ịfefe mbara igwe iji mee ka o doo anya na anyị bụ otu mmeri nke ọ dịghị onye nwere ike imeri na duels ndị a n'ịntanetị.
Na ụdị dinosaur dị iche iche, ma na-arụ ọrụ na TyrannosaurusỌbụlagodi ndị sitere n'okike dị ka Spinosaurus, ma na-echefughị ​​ndị agbakwunyere, dị ka Triceraptor (ọkara mmadụ, ọkara igwe), anyị ga-enwe ohere ịhọrọ dinosaur nke dabara n'ụdị ọgụ anyị. Na ebe a, anyị ga-enwe ụdị dị iche iche ịhọrọ, ya mere anyị na-akwado ka ị nwaa ha niile.
Dinosaur na mkpanaka gị
Full Metal Monsters tụrụ aro a ezigbo ahụmịhe egwuregwu ọgụ n'ịntanetị ọtụtụ nke anyị na-adịghị ahụ mgbasa ozi na mbụ egwuregwu na nke a na-ama ekele, ebe ọ bụ na e nwere ụfọdụ egwuregwu na site na nke a nanị eziokwu na-ama niile mgbasa ozi n'ụwa. Dị ka anyị nwere ike ikwu, Full Metal Monsters nọ na usoro mmepe, ọbụlagodi na ị naghị ahụ ya na steeti "anaghị ebipụta" site na Ụlọ Ahịa Play, ya mere a na-emelite ya site na nkwalite mgbe niile.
Un egwuregwu nke bụ teknụzụ ziri ezi, mana nke ahụ na-enye gị ohere inwe egwuregwu ịntanetị na-agaghị echefu echefu. Nke a bụ ebe ọ na-ere ahịa kacha mma ka ị banye na dinosaurs ya na egwuregwu ndị ahụ ngwa ngwa nke ị ga-akpachara anya na ọgụ ndị ahụ mgbe niile.
Nnukwu anụ igwe zuru oke na-abịa na ụlọ ahịa Google Play n'efu yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu ịntanetị dị ka a ga-asị na ị nọ n'etiti ihe nkiri Steven Spielberg Jurassic Park. Aha mma nke anyị nwere olile anya na ọ ga-akawanye mma site na mmelite kachasị n'ọdịnihu, n'ihi na ha nwere ezigbo ntọala maka ya. Anyị na-ahapụ gị na dinosaur ọzọ, ma n’ụzọ ọzọ.
Mkpụrụ anụ ndị zuru ezu
Egwuregwu ndị ahụ na-ama jijiji
Ọ nwere nnukwu ntọala iji melite
Kwalite dinosaur gị
Enweghị ọmarịcha n'ọgụ
Jurassic ogologo anụ ụwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Gbaa ịnyịnya dainoso gị na Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ zuru ezu n'ịntanetị